Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Dagaalada cadawga lagu naafeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO
Warbixintii Dagaalada cadawga lagu naafeeyay een ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO
Posted by ONA Admin	/ June 23, 2014
Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay Xaruta Dhexe ee JWXO ayaa ka warbixiyay dagaalo aad u badan oo dhacay horaantii bishan aan kujiro iyo dabayaaqadii bishii aan kasoo gudubnay. Dagaaladaa ayaa waxaana lagu naafeeyay ciidanka cadawga ee kusugan dalka Ogadenia, iyadoo lagaga dilay dagaaladaa ciidan kor u dhaafaya 80-tan oo darajooyin kala duwan lahaa iyo laba gaadhi oo lala holciyay ciidankii saarnaa. Dhaawaca badan ayay sidoo kale kala tageen. Dagaalada aad u kulul ayaa hadda ka socda gabi ahaanba dalka oo intooda badan aan faahfaahin fiican laga helin.
15/5/14 Bangala oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/5/14 Waabdalaw oo dagmada Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari tiro kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 11/5/14 Waabdalaw dagaal rogaal celis ah oo CWXO iyo kuwa gumaysiga dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 6 askari.
20/5/14 Habayska oo Fiiq katirsan dagaal 3 jeer laysku noqday oo CWXO iyo kuwa cadawga dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aad u badan waxaana faahfaahin laga helay 5 askari oo dhaawac ah.
21/5/14 Faraqsaliid oo Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/5/14 Karkoorka oo dagmada Sagag katirsan weerar gaadmo ah oo ay CWXO kuqaadeen kuwa cadawga waxay kaga dileen 11 askari 13 kalana way kaga dhaawaceen.
25/5/14 Geelnuujis oo Garbo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhex maray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/5/14 Daarasalaam oo Garbo katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawgu leeyahay oo halkaas kusugnaa waxay ku dileen 6 askari 5 kalana way kaga dhaawaceen.
31/5/14 Duleedka Dagmada Sagag ee Gobolka Nogob weerar habeenima ah oo ay CWXO ku qaadeen ciidamada gumaysiga Itoobiya ee halkaas fadhigoodu yahay waxay kaga dileen 6 askari 3 kalana way kaga dhaawaceen.
9/6/14 Owbuujiska oo Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/6/14 Dhilan oo Xamaro katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxay ku dileen 9 askari oo kuwa cadawga ah 10 kalana way kudhaawaceen.
11/6/14 Xalaalgoo oo dagmada Qabri dahare katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
Isla 11/6/14 Owbare oo Danood katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
12/6/14 Duleedka Dagmada Dhagaxbuur kamiin ay ciidanka xooga dalka Ogadenia ka xidheen waxay ku gubeen 1 baabuu oo kuwa cadawga ah waxaana ku basbeelay baabuurkii iyo wixii saaraa.
12/6/14 Gosolaleey oo Dhagaxbuur katirsan weerar ay CWXO kuqaadeen ciidamada gumaysiga ee halkaas kusugan waxay kaga dileen 6 askari.
13/6/14 Dhilan oo dagmada Xamaro katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
15//6/14 Dayr oo Awaare katirsan dagaal faraca laysulatagay oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 15 askari 17 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/6/14 Shabeelay oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 2 askari 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
16/6/14 Gurumo oo Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada dulmiga ku jooga ciida Ogadenia lagaga dilay 6 askari tiro aan lacayimina waa laga dhaawacay.
18/6/14 Heebaan oo Fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari.
20/6/14 Toonceelay oo Qabridahare katirsan dhaba gal ay CWXO ku sameeyeen waxay ciidanka cadawga kaga gubeen 1 baabuur oo uuraal ah waxaana isla basbeelay baabuurkii iyo wixiisaaraaba.
17/6/14 waxaa jidka Dirdhabe iyo Jigjiga ku gadoomay baabuur uu watay mid ka mid ah wakiilada gumaysiga ufadhiya Jigjiga oo wasiir ku sheeg ahaa waxaana goobta ku naf waayay ninka wasiirka lagu sheegay oo lagu magacaabo Maxamad Qalbi iyo ciidan hawaarin ah oo lasocday.